Adeegga - Zhongshan Xingyong Machinery Co., Ltd.
Waad ku mahadsan tahay inaad booqatay mareegahayaga, kaas oo la cusboonaysiiyay lana hagaajiyay talaabo talaabo, nagu soo dhawoow talo iyo faallo celin wakhti kasta.
Inta badan mashiinadayada waxaa loo sameeyay si loo dalbado, fadlan la xiriir oo ka hubi iibiyeyaashayada online ama iimayl / telefoon ku saabsan alaabta baakadaha, kala duwanaanta miisaanka, nooca bacaha iyo cabbirka, iwm.
Waxaan si cad u xaqiijin doonaa shuruudaha macaamiisha ka hor inta aan la siin talooyinka macaamiisha si aan u hubinno soo jeedinta aan ku siinno inay ku habboon tahay shuruudahaaga.Kadibna waxay ku siin doontaa xigasho wanaagsan.
Ka dib markii aan amar ku siino waaxdayada wax soo saarka, waxaanu si fiican u raaci doonaa amarradaada waxaanan ku ogeysiin doonaa heerka wax soo saarka.Waxaan kuu soo gudbin doonaa sawiro
1. Haddii ay jiraan wax dhibaato ah iyo khalad ah mashiinkaaga, waxaanu ku siin doonaa falcelin degdeg ah iyo xal marka aan helno macluumaadkaaga.Waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican waqtiga ugu horreeya.
2. Wakiilka adeegga maxalliga ah ayaa diyaar ah, si aan si wanaagsan u taageerno isticmaaleyaasha maxalliga ah, waxaan diyaarin karnaa wakiilka maxalliga ah si uu u sameeyo rakibaadda, komishanka iyo tababarka.Dabcan, haddii loo baahdo, waxaan kuu diyaarin karnaa adeegayaashayada inay kuugu adeegaan si waafaqsan heerka adeegga shirkaddayada.
3. Waxaan dammaanad qaadeynaa mashiinka oo dhan 12 bilood, marka laga reebo qaybaha jilicsan, laga bilaabo maalinta la soo diro mashiinka iyo hal bil.
4. Muddada dammaanadda lagu jiro, qaybaha makaanikada iyo elektiroonigga labadaba waxaa lagu beddeli karaa lacag la'aan.Dhammaan waxyeelada ay keento isticmaalka khaldan waa laga saaray.Macaamiisha waxaa looga baahan yahay inay soo celiyaan qaybaha burburay ugu dambayn hal bil.
5. Wakhtiga dammaanadda ka baxsan, qaybaha firaaqada ee bilaashka ah lama bixin doono.
6. Waxaanu ku siin doonaa taageero farsamo oo nolosha ah
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin. Alaabta sifaysan, Khariidadda goobta, Gaadhida suunka, Gaadhida Skirt Skirt, Baakadaha suunka wareejinta, Gaadhida birta aan lahayn birta ah, Qaadista suunka tubbada, Suunka Gudiyaha Korontada, Dhammaan Alaabta